ह्वाइट हाउसमा एक रात,(धनराज गिरी)
शीर्षक देखेर धेरै पाठकहरु झस्किन बेर छैन । 'लौ यो मान्छे त अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई गजल सुनाउन अमेरिका पुगेछ' भन्नुहोला । न आत्तिनुहोस् म पनि तपाईंहरुजस्तै माटोप्रेमी हुँ । यो देश छोडेर उड्नेवाला छैन । उडे पनि फर्किन्छु । म अन्त रमाउन्न- पक्का हो । यो ह्वाइट हाउस नेपालमै छ- कैलाशनगर चितवनमा । अझ लहडीहरुले कविडाँडा नाम राखेछन् । 'न त्यहाँ डाँडा छ, न त भनेजस्तो कवि' कसरी कविडाँडा भनेर एकजना धोबीले मसित प्रश्न गर्यो । उसको काम नै जे कुरामा पनि खोट देखाउनु थियो । मलाई झोंक चल्यो । तुरुन्त जवाफ दिएँ 'हे नकारात्मकताका पुजारी तिम्रो अनन्त दृष्टिकोणलाई म कुन नाम दिउ, अनिल सिग्देल त्यहीं छन् । फगत् साहित्यलाई आफ्नो जिन्दगी ठान्ने प्यारो भाइ राष्ट्रिय पहिचान बनाइसकेको पात्र सङ्गीत आयाम पनि त्यहीं छन् । अरु पनि कति छन् कति ! पढेनौ १५ गते शनिबारको चितवन पोष्ट ? त्यो भावनात्मक बिम्ब हो के स्वर्णीम बस्ती भौकाहा चितवनमा सुनै सुन छ 'डाँडा' प्रतिको सम्मान हो त्यो । गुलाफबागभरि गुलाफै गुलाफ मात्र छ र ? नारायणगढमा नारायणै नारायण मात्र बस्छन् ? भरतपुरमा फगत् भरतहरुको मात्रै डेरा छ र ? धोबिजी टाप । कविडाँडा आई लभ यू ।
तीनजना विशेष क्षेत्रीहरुको संगत गरें मैले जीवनमा । रामबाबु सर, हरिप्रकाश बुढाथोकी सर र एल.बि. क्षेत्री । तीनजनाको धेरै विशेषताहरु अनुरुप नहोलान् । त्यो बेग्लै कुरा हो । एउटा कुरा मिल्दछ । यी क्षेत्रीहरु कर्मले नै दिलदार छातिको लम्बाइ चौडाइ उचाइ अपरिमेय भन्या । अनुभूत तथ्य वर्षौंको संगत पछि हृदयले ठम्याएको सत्य । दुईजना क्षेत्रीहरुका बारेमा होइन म आज एल.बि. दादाको बारेमा बोल्ने छु । यी क्षेत्रीसित मेरो हृदयको तार कसरी जोडियो 'पता नही' । ना …। ना…ना…। धनराज भाइ ना …।' दादाको यही अदा मलाई सदा मन पर्यो । हक्की स्वभाव मलाइ मन पर्छ । झन् वीरेन्द्र क्याम्पसको नवनिर्मित पुस्तकालय भवनले मेरो एल.बी प्रतिको सम्मान दोब्बर बनाइदियो । मलाई थाहा छ एल.बी. दादालाई नेपथ्यमा धारे हात लगाउनेहरुको अनिकाल छैन । मलाई थाहा छ हैसियत हुने मान्छेकै बिरोध हुन्छ । यो दुनियामा काम गर्ने इच्छाशक्ति भएको मान्छेले काम गर्छ त्यसको विपरित स्वभाव भएको हतभागीले बिरोध गर्दछ । लाहुरे छँदा उनी गाउँ कैलाशनगर आउँथे । अरु औसत लाहुरेहरु तास र दारुमा लिप्त हुन्थे अझै हुन्छन् । तर उनी कितबसित मायापिरति लगाउनैमा व्यस्त मायापिरतिको हकमा पनि हाम्रा लाल साँची नै बहादुर यता नजाउँ । बाटोमा एम्बुस हुन सक्छ । यी बन्दुके दादा कलमसित रमाउन थाले । अङ्ग्रेजी साहित्यका विद्यार्थी छँदै थिए । भावनाका धनी थिए- रामबाबु सरको भाषामा एक्सन ओरिएन्टेड पनि । उनी काममा विश्वास गर्दछन् । सपना देख्दछन् । शब्दप्रेमीहरुका प्रेमी हुन् । मैले भूपिन व्याकुलको कविता सङ्ग्रह पाँचथान किन्दा उनी २० थान किन्छन् । धनराज म मनराज मेरा दाजै एल. बी. अर्थात् मेरो हृदयको भाषामा लभ्ली ब्रो । हाँ धनराज भाइ कविडाँडामा एक नाइट हो जाये मेरै निवासमा । मसित प्रस्ताव राख्नुहुन्छ- बाँदरलाई लिस्नु साहित्य भनेपछि जहाँ पनि पुग्ने भनेर बदनाम भइसकें । साहित्यकै कारणले कति ठाउँमा जागिर छोड्नुपर्ने हो थाहा थाहा छैन । जे होस् मोरी साहित्य गोरीले हृदय चोरी …। तो मैं क्या करुँ रमेश प्रभात सुरेन्द्र अस्तफल भूपिन व्याकुल जी शर्मा उदय अधिकारी संगीत आया आदि इत्यादिहरुसित सल्लाह भयो । राष्ट्रिय सहमति कायम भयो । प्रस्ताव पारित भयो- ह्वाइट हाउसमा एक रात, अब सुरु गरौं बात |
२०६६ साल फागुन १३ गते बिहीबारका दिन बालकुमारी उच्च माविमा हाम्रो बैठक बस्यो । सामान्य खाका तयार भयो । मित्र प्रभाकर पण्डितको निशुल्क सहयोग पनि अर्थपूर्ण र सार्थक रह्यो । अलि चर्चित स्रष्टाहरुको लोभ कसलाई हुँदैन र ? नारायण ढकाल, हरि अधिकारी, विमल निभा, पुरुषोत्तम सुवेदी, श्यामल, गोविन्द वतमानादि राजधानीबाट । उदय र व्याकुलले यसमा विशेष सहयोग गरे । हेटौंडाबाट नाम कल्पना गरिए जतिलाई उतार्न सकिएन । त्यही दिन हेटौंडासित हाम्रो कार्यक्रम जुध्यो । भाइ निमेष निखिलले हेटौंडाको प्रतिनिधित्व गरे । दिनको ठीक तीन बजे कार्यक्रम सुरु गर्ने भनिएको भए तापनि विविध कारणले कार्यक्रम सुरु हुन दुईघण्टा ढिला भयो । विनोदजी व्याकुल र म पनि हेटौंडाबाट ढिलै आयौं । मलाई हेटौंडामा बस्न भनिदैथियो आर.सी. रिजाल र हयग्रीबहरु कर गर्दै थिए । विनम्र भाषामा अनुरोध गरें 'लाहुरे दाइले मलाई गोली ठोक्छन् ।' आउनुथियो आइयो । निमेष निखिल र मेरो कथा अनुरुप उनी हेटौंडाबाट एक्लै म पूर्वी चितवनबाट िसंगल लगभग ६०जनाको अनुमान गरिएको थियो । उपस्थिति जनाउने कापीमा ५४ नम्बरमा मैले दस्तखत गरें । पक्कै पनि साठी कट्यो । हाम्रा आदरणीय अग्रज प्रेमविनोद नन्दनज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रमको शुभारम्भ भयो । राजधानीबाट आउनु हुने स्रष्टाहरु फगत् तीन- विमल, श्यामल र पुरुषोत्तम उहाँहरुलाई पर्खदा यता जम्मा भएका स्रष्टाहरुको धीरताको बाँध भत्किने डर । देखाजायेगा । एल.बी. दादा सभापति, जी. शर्माको उद्घोषण, उदय अधिकारीको स्वागत मन्तव्य । बहुत मीठो कविता सुनाए प्यारा भाइ संगीत आयामले । बोहजी सुन्दर र आकर्षक भने ूआज हामी कविडाँडाका सर्जकहरुले सुनाउने होइन सुन्ने दिन हो । पाहुनाहरुलाई मौका दिनुपर्दछ । ध्यवाद उनको यो शैलीको राम्रो तारिफ भयो । रमेश प्रभातको कार्यपत्र पूर्णप्रसाद अधिकारी र भूपिन व्याकुलको टिप्पणिले कविडाँडाको इतिहास खोतल्यो । भाइ खुमनारायण पनि हाजिर । साँच्ची नै साहित्यमय भयो कविडाँडा । ढिलै भएपनि राजधानीबाट आउने भनिएका पाहुनाहरु पनि आइपुगे । वाफ रे कैलालीबाट पनि । उनै कोकिलकण्ठी । सरस्वती दिदी अलि ढिलो उदाउनुभयो । दिदीभाइको गफारम्भ । कार्यक्रम चलिरहेछ सबै बोलिरहेछन् । एउटा उक्ति त्यहाँ पनि चरितार्थ भएझैं लाग्यो । उक्ति हो "सबैले बोले कसैले सुनेनन् ।" अचेल यो एउटा साहित्यिक रोग नै भएको छ । म क्षमा माग्दै मनको कुरा भन्छु । हामी सर्जकहरु सुन्न भन्दा सुनाउन पाउँदा बढी आनन्दित हुन्छौं कि ? कसैले सिर्जना वाचन गरेर टुङ्ग्याएपछि निखित भाइ "राम्रो राम्रो" भन्थे र म तिर पुलुक्क हेर्दै श्वेत पत्र जारिगर्थे 'के गर्ने दाइ ध्यान दिएर सुनिएन । यति त भन्नै पर्यो ।' त्यहाँ कस्तो सिर्जना सुन्न पाइन्छ भन्दा पनि के के खान पाइन्छ भनेर त सोचेनन् मानिसहरुले यस्तो खुराफात पनि आयो दिमागमा । भीडमा साहित्यको मूल्य हुँदैन भन्ने कुरा बुझेर कतिपय मानक स्रष्टाहरु भीडबाट टाढा रहन्छन् । रामबाबु सर अक्सर भन्नुहुन्छ- कविता र सुन्दरताको रसस्वादन एकान्तमा गर्नुपर्दछ । त्यो रात मेरा लागि ज्यादै महत्वपूर्ण रात रह्यो । बालकुमारी उच्च माविमा कार्यरत मेरा स्थायी पाठकहरुले मलाई धेरै प्रेरणा दिए । नारायण भुसाल, यादव पाठक, अधिकारी बन्धु, इश्वरी कँडेल अर्का मितवा युवराज भुसाल धेरै धेरै । त्यसैगरि आफ्नो कान्छो छोरोभन्दा पनि कान्छो र सिर्जनामा दम भएको अपार सम्भावनाको स्रोत सुमनराज श्रेष्ठ सित मीठो भलाकुसारी भयो । धेरै घतलाग्दा इतिहासहरु स्मरण सम्झाए प्यारा सुमनले । वाह एल.बी. ब्रो को सचमुच कमाल करदिया । पहिलो चरणको कार्यक्रमको बीट मार्ने क्रममा 'होस्ट' एवम् 'दोस्त' दादाले कमाल गर्नुभयो । त्यो चित्र बिचित्र । शब्दातीत 'यो उदय अधिकारी फुच्चे मकहाँ आउँथ्यो । एक दिन सुम्निमा छोड्यो । एक दिन पारिजात छोड्यो । जबर्जस्ती मलाई नेपाली साहित्य पढ्ने बनायो । आखिर म पनि …। के भन्ने …।' दाजुको खुसीको सीमा नै थिएन । आफ्नै आँगनमा यति धेरै इष्टमित्रहरु डाकेर रमाइलो गर्दा कसलाई आनन्द आउँदैन र ? पढेका र पढाएका क्षेत्रीका लागि धनभन्दा मन ठूलो हो । मान्छेसित रमाउन पाउँदा साँच्ची रमाउँछ मान्छे । त्यहाँ त्यो रात हामी एउटा इतिहास निर्माण गर्दै थियौं । त्यो दिन कान्तिपुरमा शारदा शर्माको सारगर्भित लेख छापिएको थियो । वर्तमान' लाई शारदाजीले धेरै महत्व दिनुभएको थियो । मलाई लाग्यो एल.बी. दादा पनि वर्तमानमा रमाउन चाहनुहुन्छ । एक एक 'लम्हा' लाई चाड बनाउन चाहनुहुन्छ । 'जिन्दगी लम्बी नहीं बढी होनी चाहिए बाबु मोशाय' म आनन्द हिन्दी चलचित्र राजेश खन्ना र अमिताभ बच्चनलाई सम्झिन पुग्दछु ।
दोस्रो चरणमा जलपान रसपान रमाइलो । अब वातावरण झन् रङ्गीन बन्दछ । आ-आफ्नो रुची अनुसारको भोजन ग्रहण गरिन्छ । नास्ता पछि डिनर । दुईपटक माइक समाएं मैले । के के वाचन गरियो भुलियो । स्रोताहरुले गजल मन पराएझैं लाग्यो । कविता साँच्ची नै कविताजस्तै हुनुपर्दछ भन्ने दृढ मान्यताका धनी श्यामलको एक वाक्य 'कविता कुनै केटीको नाम होइन'ले बजार लियो । म धेरै बोल्न र गाउन पर्ने मान्छे । त्यो रात साथीहरुलाई मैदान खाली गरिदिएं । भाइ अर्जुन अस्तफल र श्यामलजीको बर्चस्व कायम रह्यो । १२.३० सम्म कार्यक्रम चलेछ । बिचरी पातली मसितै आएर लुपुक्क । मेरी पातली अरु कोही होइन नि । राताफूल दाजै चेतकान्त चापागाईं । कुनै पनि सिद्धान्तको पर्खालभन्दा हाम्रो नाता धेरै अग्लो बटारिएका पात्रले विमल निभा दाजुहरुको सकेलमा मेरो बारेमा राम्रो विज्ञापन गरेका रहेछन् । विमल निभा र श्यामलजी बिहानै मलाई प्रेमामृत पिलाउँछन् 'धनराज गिरी पनि भलाद्मी नै रहेछ । बेकारको भ्रम सिर्जना भएछ राजधानीमा ।' मज्जाले हासियो । धेरै रमाइलो भो । दाजु विमल निभाको शैली ज्यादै प्यारो । अलिखित दादाका बारेमा धेरै चर्चा पायो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा 'यात्री' कविताले सम्मान पायो । 'देवकोटा पनि जुवाडे थिए' यो सुन्न पाउँदा मभित्रको भूतपूर्व ग्यारिज खेलाडिले राहत अनुभूत गर्यो । 'सेन्स अफ ह्यूमर' प्रशस्त रहेछ दाजु निभामा । 'सिउँडी' त्यसै लोकपिय भएको छैन । मलाई धेरै धेरै हिन्दी साहित्य पढ्ने सुझाव दिनुभयो । श्यामल 'म्यान अफ द म्याच' बन्न सफल हुनुभयो ।
दाजु एल.बी. क्षेत्रीको आकाशजत्रो छातिलाई सलाम गर्न चाहन्छु । 'कविडाँडा' नाम सार्थक होस् । घडेरी प्लटिङ्ले कुरुप भएको कैलाश नगर खडेरी होइन मनसुनप्रेमी बनोस् । 'White House को त्यो रात' सार्थक रह्यो । धेरै धेरै सर्जकहरुले साथ दिनुभयो । आउन असमर्थ हुनेहरुसित पनि कुनै गुनासो छैन । भाभीश्रीलाई विशेष नमस्कार । एल.बी. दादा हमने गुस्ताखी की इस खता की इक दी सजा है- अपनी दिल में हमें उम्र कैद किजिये । आइ रियल्ली लभ यू ब्रो खुदा गवाह ।